काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई कोरोना संक्रमण भएको छ ।
डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफुलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिएका हुन् ।
'सतर्कताका बाबजुद मलाई कोभिड-१९ ले पुन: संक्रमण गरेको छ । पिसिआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ ! ळक्षण सामान्य छ । केही समय यता निकट सम्पर्कमा आउनुभएकाहरू सतर्क रहनुहोला । केही दिन आइसोलेसनमा रहनेछु । असुविधाकानिम्ति क्षमाप्रार्थी छु ।'
गठबन्धन मूलभूतरुपमा सफल भयो, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनसम्म लैजान्छौं- प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन मूलभूतरुपमा सफल भएको बताएका छन् । उनले मध्यपुरथिमिमा गठबन्धनको मर्मलाई पक्डिन सफल देखिएको भन्दै अगाडि थपे, “हामीले गठबन्धनबाट
मतदान गरेपछि प्रचण्ड भन्छन्- जित र हार निर्वाचनको स्वभाविक प्रक्रिया हो
चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भरतपुर महानगरपालिका–१४ स्थित नेपाल पुलिस स्कुल शान्तिपुरबाट मतदान गरेका छन् । मतदान पछि सञ्चारकर्मीसंग कुराकानी गर्दै उहाँले
प्रचण्डले गरे चितवनबाट मतदान
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चितवनबाट मतदान गरेका छन् । प्रचण्डले भरतपुर १४ स्थित नेपाल पुलिस स्कुल शान्तिपुरबाट मतदान गरेका छन् । उनले बुथ